यी ४ राशीका पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाको भाग्य चम्कन्छ ! मिल्छ जीवनभर खुशी ! – NepalajaMedia
यी ४ राशीका पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाको भाग्य चम्कन्छ ! मिल्छ जीवनभर खुशी !
कन्या राशी : कन्या राशी भएका पुरुषहरुको प्रेम सम्बन्ध बलियो हुन्छ । उनीहरु आफ्नो पत्नीको प्रेममा गहिरोसँग डुबेका हुन्छन् । घरायासी काम बाहेक सामाजिक काममा पनि अग्रसर रहने हुनाले मान र प्रतिष्ठा पाउने गर्छन्। यो राशी भएका पुरुषहरु आफ्नो जिम्मेवार प्रति हुने बफादार हुने भएकाले पनि पत्नीसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो हुने गर्छ ।
Prevपाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, भाद्र २४ गते बुधबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Nextराजधानी काठमाडौँमा, कोठा भाडामा बस्नेहरुलाईआयो ठुलो। खुसीको खबर पुरा हेर्नुहोस १ सेयर गरौ।
सिमकार्डमा हुन्छ सुन,यसरी सकिन्छ निकाल्न